Navoaka | ny kinova vaovao an'ny tontolon'ny birao Xfce 4.14 | Avy amin'ny Linux
Navoaka ny kinova vaovao an'ny tontolon'ny birao Xfce 4.14
Taorian'ny fampandrosoana efa-taona mahery, ny famoahana ny kinova vaovao an'ny tontolon'ny birao Xfce 4.14 dia nomanina, natao hanomezana birao mahazatra izay mitaky loharanon-karena kely indrindra amin'ny asany.
Xfce dia misy andiana singa mifandraika izay raha ilaina dia azo ampiasaina amin'ny tetikasa hafa. Ireto singa ireto dia misy: mpitantana varavarankely, mpandefa fampiharana, mpitantana fampisehoana, mpitantana fivoriana sy fitantanana herinaratra, a Thunar manager manager, tranonkala Midori, mpilalao haino aman-jery Parole, tonian-dahatsoratry ny mousepad ary rafitra fikirakirana tontolo iainana.
Inona no vaovao ao amin'ny Xfce 4.14?
Ao amin'ity kinova vaovao ity ao amin'ny manager xfwm4, nanampy vsync tamin'ny alàlan'ny OpenGL, niseho ny fanohanana ny libepoxy sy DRI3 / Present, ary GLX no nampiasaina fa tsy Xrender.
Fanamafisana ny fanodinana fampivoarana miaraka amina pulse blanking (vblank) mba hiarovana anao amin'ny fifindrana (triatra). Ny fahaiza-manao scaling vaovao an'ny GTK3 dia tafiditra ao, izay mamela ny fanatsarana ny asa amin'ny efijery misy hakitroka pixel avo (HiDPI).
Nohatsaraina ny fanohanana GLX rehefa mampiasa mpamily NVIDIA tompony. Nanampy fanohanana ny rafitra fampidirana XInput2. Nampiditra lohahevitra famolavolana vaovao.
Nisy backend colord vaovao nampiana ao amin'ny configurator xfce4-setting hametraka ny solontenan'ny loko marina amin'ny fampiasana mombamomba ny loko. Ny backend dia mamela anao hanome fanohanana fitantanana loko ho an'ny fanontana sy fanaovana scanner amin'ny orinasa; Raha te hampiasa ny piraofilin'ny mpanara-maso dia tsy maintsy manisy serivisy fanampiny toy ny xiccd ianao.
Xfce 4.14 dia manolotra kilasy style CSS vaovao hampiasaina amin'ny famoronana lohahevitraOhatra, kilasy bokotra misaraka no ampiana ho an'ny fiasa miaraka amina vondrona misy varavarankely sy ny fananganana manokana ho an'ny fametrahana marindrano sy marindrano ny tontonana. Ao amin'ireo plugins ho an'ny tontonana sy amin'ireo rindranasa, misy sary an'ohatra an'ohatra.
Ny firafitra fototra dia misy ny fampiasana Dashboard Profiles, izay mamela anao hamorona, hitahiry ary hampakatra ny mombamomba ny famolavolana singa ao amin'ny tontonana
Ny mpitantana fivoriana xfce4-session dia manome fanohanana amin'ny fanombohana fangatahana, amin'ny fiheverana ireo vondrona laharam-pahamehana izay mamela anao hamaritra ny rojom-piterahana amin'ny fanombohana.
Amin'ny lafiny iray ny interface fitantanana herinaratra nohatsaraina (xfce4-power-manager), miaraka amin'ny fanatsarana fanatsarana ireo rafitra mijanona izay tsy aseho intsony ny fampitandremana bateria ambany.
Nampidirina sivana ireo zava-nitranga mifandraika amin'ny rafitra famatsian-kery nampitaina tao amin'ny xfce4-nampandrenesina ka hita taratra ao anaty hazo izany (ohatra, ny hetsika fanovana famirapiratana tsy ampitaina). Nanampy ny fahaizana miantso ny interface fitantanana herinaratra rehefa tsindry ny bokotra XF86Battery.
Ao amin'ny plugin dashboard, nampiana safidy mba hampisehoana ny androm-piainany sisa tavela sy ny isan-jaton'ny vidiny.
Ny mpitantana ny rakitra Thunar dia nohavaozina, izay efa namboarina tanteraka ny tontonana fisehon'ny lalan'ny fisie.
Ny bokotra dia nampiana tamin'ny tontonana hamakivakiana ireo lalana misokatra teo aloha ary hanohy, hitety ny lahatahiry lehibe sy ny lahatahiry lehibe.
Ho fanampin'izay, nohavaozina ny Thunar Plugin API (thunarx), izay manome fanohanana ny fitsinjovana GObject sy ny fampiasana fampirimana amin'ny fiteny fandaharana isan-karazany. Mampiseho ny haben'ny fisie amin'ny bytes.
Ireo mpanera dia azo tendrena hanao hetsika nofaritan'ny mpampiasa. Ny fahafaha-mampiasa Thunar UCA (User Configurable Actions) ho an'ny loharanom-pahalalana ivelany dia napetraka. Fanatsarana ny fomba sy ny interface.
Ny plugin fanaraha-maso ny tontolon'ny PulseAudio dia nanampy fanampiana ho an'ny protokol MPRIS2 ho an'ny fifehezana lavitra ny playback amin'ny mpilalao media. Azo atao ny mampiasa fanalahidy haino aman-jery manerana ny birao (manomboka ny fizotran'ny dingana fanampiny xfce4-volumed-pulse).
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ity fandefasana ity ianao dia afaka manatona ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Navoaka ny kinova vaovao an'ny tontolon'ny birao Xfce 4.14
Daniel Aragon dia hoy izy:
Tsara. Manana kovetabe mint 19.2 aho. Misy fomba fanavaozana ny xfce ve raha tsy miandry ny famoahana ny volana oktobra ho avy izao?
Valiny tamin'i Daniel Aragon
Manjaro dia hamela anao hisafidy eo amin'ny FreeOffice sy LibreOffice
Navoaka ny fanavaozana fahatelo an'ny Ubuntu 18.04.3 LTS